“Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleysanaya Ballon d’Or xitaa haddii uu ku guuleysan waayo Euro 2016.” – Gool FM
“Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleysanaya Ballon d’Or xitaa haddii uu ku guuleysan waayo Euro 2016.”
(Madrid) 06 Juunyo 2016. Rugcadaaga reer Brazil iyo kooxda Real Madrid Roberto Carlos ayaa aaminsan in Cristiano Ronaldo oo ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or ee sanadkan xitaa haddii u xulkiisa Portugal ku guul darreysto Euro 2016.
Kabtanka xulka Portugal ayaa markale sanadkan ku guuleystay gool dhalinta Champions League isagoo waliba dhaliyay rigooradii muhiimka ahayd ay uga qaadeen koobka kooxda Atletico Madrid.
Daaficii hore ee xulka Brazil ayaana aaminsan in guushaasi uu gaaray Ronaldo ay ku filnaan karto inuu gacanta ku dhigo Ballon d’Or markiisii afaraad.
“Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleysan doona Ballon d’Or, xitaa haddii uu ku guuleysan waayo Euro,” Carlos ayaa sidaa yiri kaddib kulankii Corazon ee axadii ka dhacay Santiago Bernabeu.
“Messi waa ciyaaryahan fiican, laakiin ku guuleysiga Champions League wax badan ayuu ka walax yahay.
“Laacibka ugu fiican adduunka waxaa go’aamiya tartanka, waxaan u maleynayaa inuu markale noqon doono laacibka ugu fiican adduunka.”.
Roberto Carlos ayaa sidoo kale qaba in Neymar uu mar uun noqon doono laacibka ugu fiican adduunka: “Waa inuu sii wadaa waxa uu sameynayo waxuuna maalin uun noqon doonaa kan ugu fican adduunka.
Neymar ayaa seegaya Copa America ee ka socda dalka Mareykanka inkastuu ciyaari doono koobka Olympicada ee ka furmi doona Rio de Janeiro ee dalka Brazil, wuxuuna qiray Carlos inuusan ka helin Copa America.
“Ma jecli Copa America, ciyaartoydu aad ayay u daalan yihiin wayna dhaawacmi karaan.”.
AYAAMAHA CUSUB EE INTER MILAN: ''Waxaan soo celinaynaa waayihii ay Inter Milan iibsan jirtey xiddigaha ugu waawayn'' - Zhang Jindong milkiilaha cusub
Jamie Vardy oo xulka qaranka ingiriiska u raacay France laakiin xageey wax marayaan?